Izinhlobo ze-plums | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Izinhlobo ze-plums
Izinhlobo ze-plums zensimu yakho
Ungakwazi ukukhuluma ngokungapheli mayelana nezinzuzo zama-plums: kungathuthukisa ukucinwa kwesisu, kuthinta ukucindezeleka kwegazi, kungasetshenziswa njenge-laxative, futhi kufane nemifula - ukususa i-cholesterol. Ngokungapheli ungakhuluma ngezinhlobonhlobo zezinhlanzi. Nokho, namuhla sizozama ukugxila kuphela ezinhlotsheni ezidumile kakhulu.
Iplamu yamapayipi: incazelo kanye namathiphu okukhula
Ipulazi le-peach ngumuthi, ukulima okuletha izinkinga kuphela, kodwa nokuthakazelisa ukucabangela isivuno. I-berry ivuthwa ngo-Agasti, ubukhulu bayo bukhulu, inyama yamajikijolo inamanzi, omuncu-amnandi. Ipulazi le-Peach ayifaneleki kuphela ukusetshenziswa, kepha futhi ekwakheni ukulondolozwa okuhlukahlukene kwalo.
Ukukhetha izinhlobonhlobo ezinhle zezinhlanzi zaseChina
I-plum yaseShayina emasimini ethu ayivamile. Noma kunjalo, imelana nesithwathwa, iveza izithelo ngokushesha kunabanye futhi inikeza isivuno esikhulu. Zonke izinhlobo zikhona zangempela, futhi sibonisa uhlu lwakho lwezinhlobo ezidume kakhulu ze-plums. U-Alenushka Uhlobo lwe-Alenushka lwatholakala ngokuwela izinhlobonhlobo zeBlack Ball ne-Chinese Girl.
Zwayelana nezinhlobo ezihlukahlukene zeplamu ephuzi
I-Plum - ingenye yezihlahla zezithelo ezivame kakhulu ezweni lethu. Umkhiqizo ophezulu wezitshalo ezingenakuzithoba kanye nokunambitheka kwezithelo ezingenakuqhathaniswa kwamenza wathandwa kakhulu. Ngenxa yemizamo yabalimi, i-plum ithole izinhlobo eziningi eziheha ukunambitheka okungajwayelekile nokuphunga.
I-Plum "U-Honey White": incazelo ye-agrotechnology ehlukahlukene nokulima
Izinhlobo zokuvuthwa zakuqala "I-Honey White" zihlukaniswa yizivuno eziphakeme, izithelo ezinkulu ezinkulu ezinomusa omuhle omnandi nephunga elimnandi. Izinhlobonhlobo zithandwa nabalimi abaningi kakhulu ngaphandle kwezwe. Ake sihlaziye izidingo eziyinhloko zalesi sihlahla ukuze sitshale futhi sizinakekele. Umlando wokulima we-"White White" ipum. Ukubhalwa kwezinhlobonhlobo kungokwasosayensi wegatsha laseDonetsk le-Institute of Horticulture UAAS, ohlonishwa yizolimo zezolimo e-Ukraine uLiliya Taranenko, obengeminyaka engama-66 yobudala bakhe esebenza iminyaka engu-62 esebenza ku-Artyomovskaya Experimental Station Nursery.
Konke mayelana nezinhlobonhlobo ze-plums "Anna Shpet"
Plum "Anna Shpet" okushiwo irekhodi phakathi izitshalo engadini ngokuvumelana isivuno. Unyaka ngamunye unikeza abalimi izithelo ezihlwabusayo, ezimnandi nezomnandi, ezisetshenziselwa impumelelo enkulu ekwenzeni izitsha ezihlukahlukene, amalungiselelo ebusika noma njengediliva elizimele. Umlando wokuzalanisa Izinhlobonhlobo zeplamu "Anna Shpet" yatholwa ekuqaleni kwekhulu le-XIX, ngo-1870.
Konke okubaluleke kakhulu nge-plums ehlukahlukene "iBatyatyrskaya"
I-plum ayiyona nje indlu yokugcina izinto eziwusizo, kodwa futhi nomkhiqizo ohlwabusayo kakhulu. Ngakho-ke, ngamunye wegadi, ekhetha isihlahla sesithelo esivinini sakhe, ufuna ukuba amjabulise ngokuvunwa okuhle njalo ngangokunokwenzeka. Ababelethi banakekela izitshalo ezikhulayo. Yilabo abaletha izinhlobo ezihlukahlukene ezizenzekelayo ezikhiqiza ikhaya okuthiwa "Bogatyrskaya".
I-Plum Mirabelle (Mirabella)
Ensimini enhle njalo kunezinhlobo eziningana ze-plums. Futhi lokhu akumangalisi, ngoba abantu bakhulile lesi sithelo iminyaka engaphezu kwekhulu. Phakathi nalesi sikhathi, kwavela izinhlobo ezingaphezu kwezingamakhulu amathathu zeplamu. Futhi hhayi indawo yokugcina kulolu chungechunge yi-plum Mirabel. Incazelo ye-Botanical Mirabel yiqembu lezinhlobo ze-plums ezikhula emithini ekhulayo, enezimpande ngendlela yenduku kanye negrey grey phezu kwesiqu kanye namagatsha.
Konke okubaluleke kakhulu ngezinhlobonhlobo zeplamu "Angelina"
Emitimini yezitshalo zethu njengomuthi onjengeplamu kuthandwa kakhulu. I-plum iyinhlobo eligcwele lezitshalo zezithelo zamatshe, ukubalwa kwezinombolo eziningana ze-subgenera, futhi kuzo zonke izinhlobo ezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo. Kodwa ukuze ukhethe umuthi wesithelo, kwanele ukwazi ngezici zezinhlobonhlobo ezikuyo. Ngakho-ke, kulesi sihloko sibheka izici zobuningi be-"Angelina".
Konke okubaluleke kakhulu ngokukhuphula iplamu ye-ornamental "Pissardi"
I-Plum ayiyona nje isitshalo esinezithelo zayo ezinomdla okumangalisayo futhi ziyizinto ezinhle kakhulu zokwenza i-jam enhle kakhulu ebusika. Kungenza futhi imisebenzi yokuhlobisa futhi isebenze njengento ehle kakhulu yokuklama umhlaba. Ikakhulukazi uma liyiqhwa elibomvu "Pissardi". Lolu hlobo lunikeza ukunakwa kombala wokuqala nombala weqabunga, ozokwenza ukunambitheka okhethekile esakhiweni segadi, cottage, epaki noma utshani.